I-Fortnite isebenze ukudlala phakathi kwe-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One okokuqala | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwento yokuba iMicrosoft yafikelela kwakudala, u-Sony wayenza yacaca into yokuba ayinamdla ekwenzeni i-cross-platform online yokudlala. Ukuhamba okunengqiqo kuthathela ingqalelo indawo ephambili kwinkampani yaseJapan kwimakethi yemidlalo yevidiyo. Kodwa yonke into itshintshile namhlanje I-Fortnite ngumdlalo wokuqala ovumele le nkqubo ifunwa kakhulu, kwaye kubonakala ngathi akukho mntu ubonile.
Ubuncinci iingqikelelo zokuqala ziqala ukugcwala ngaphakathit, kwaye yonke into yalatha kwinto yokuba indawo yokudlala eqongeni ifikile ngokuqinisekileyo kwizikhombisi.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo Reddit Ibiyindlwane yemibuzo, ngokucacileyo ubanga ukuba ufumene umsebenzisi eFortnite ngegama lesidlaliso elingenakusetyenziswa ngeNethiwekhi yePlayStation kodwa enokusetyenziswa ngaphakathi kweXbox Live. Ewe ukuyiqinisekisa, waya kwiXbox yakhe enye wakhangela umsebenzisi, ngubani onokuyifumana ngenye indlela. Kodwa olu ayilo vavanyo oluchanekileyo, oluchazayo ngutata kunye nonyana wakhe odlala iFortnite enye kwi-Xbox enye kwenye kwiPS4, ngaphandle kokuba ifoto ikumgangatho ophantsi kakhulu, sinokuqonda ukuba kunjalo.
Ngale ndlela, sinokuqinisekisa ukuba umphuhlisi we-Fortnite uzalisekisile iphupha labasebenzisi abaninzi ngokwabelana ngolonwabo phakathi kwamaqonga omabini. Sishiya ikhonkco ukuze ubone umfanekiso womdlalo LAPHA. Ngamafutshane, oku kubonakala kungathandwa, singatsho ukuba akukho nto izakwenzeka, kuba no Microsoft okanye u-Sony khange benze zinkcazo malunga nento eyenzekileyo, ke yonke le nto inokuba yayiluvavanyo ngakumbi yinkampani yonjineli yomdlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Fortnite isebenze ukudlala phakathi kwe-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One okokuqala
Isamsung sele ivumela ukucinywa kweqhosha elinikezelwe kwi-Bixby